Guddoomiye Yarisow oo dhaawiciisa saaka loo qaadayo dalka dibadiisa – Radio Daljir
Luulyo 25, 2019 5:33 b 0
Ilo ku dhow dhow Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xaalada Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Yariisow ay weli dhaqaatiirta la tacaalayaan, lana filayo in saaka loo qaado dalka dibaddiisa.
Dhaqaatiirta ayaa xalay ku guuleystay labo qalliin ah oo uu maray Eng. Yariisow, iyadoo laga saaray qolka Qalliinka, balse uu ku jiro qolka xaalada degega ah oo ay si dhow ula socdaan waxa ka soo kordha xaaladiisa.
Qaar ka mid ah Dhaqaatiirta ayaa rajo ka muujiyay xaaladiisa, waxaana ay wadeen dadaal badan, iyadoo xalay Isbitaalka Digfeer ay buux dhaafiyeen dadweyne kala duwan iyo Mas’uuliyiin.
Wararka ayaa sheegaya in diyaarado laga leeyahay dalka Qatar iyo Turkiga oo ah kuwa Ambalaasta ay saaka ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho, si dhaawacyada loogu qaado.
Diyaarad ay leedahay dalka Qatar oo xalay saqdii dhexe la filayay inay soo gaarto Muqdisho ayaa dib u dhacday, waxaana la filayaa in diyaaradaas ay saacadaha soo socda ka soo degto Garoonka Aadan Cadde.
Gen Khaliif Ciise Mudan oo Fariin u diray DFS (Daawo)